विश्व सम्पदा क्षेत्रमा कंक्रिट संरचना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन ३०, २०७८ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र विश्व सम्पदा क्षेत्रको मूल्यमान्यताको प्रतिकूल हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको छ । महानगरको भौतिक निर्माण विभागले हनुमानढोकास्थित नौतले दरबारको दक्षिणतिर राष्ट्रिय झन्डा राख्ने भन्दै शनिबार राति सिमेन्टले ढलान गरेर पिलर ठड्याउने भाग बनाएको हो ।
विश्व सम्पदा क्षेत्रमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको भन्दै स्थानीयवासी र सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मीले विरोध जनाएका छन् । कंक्रिट भर्न बनाइएको जाली आइतबार स्थानीयवासीलेभत्काइदिएका छन् । ‘हामी यहाँ कंक्रिटको संरचना बनाउन दिँदैनौं,’ स्थानीयवासी गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘हामीले विरोध गर्दै आएका थियौं । शनिबार राति जबर्जस्ती बनाइएछ ।’
महानगरको भौतिक निर्माण विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाका अनुसार यहाँ ८ वटा झन्डा राख्न लागिएको हो । ३५ मिटर अग्ला झन्डा सम्पदा क्षेत्रको उचाइसँग मिल्ने गरी राखिनेछ । ‘माइतीघर, स्वयम्भू लगायतमा पनि राष्ट्रिय झन्डा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्त १०३ मिटर अग्लो झन्डा राखेका छौं । यहाँ भने विश्व सम्पदा क्षेत्रको उचाइभन्दा अग्लो नहुने गरी राख्न लागेका हौं ।’ संरक्षणकर्मी र स्थानीयले भने ती झन्डा हनुमानढोका प्रवेश गर्ने ठाउँमा राख्न माग गर्दै आएका थिए । ‘हामीले जुद्ध शालिकछेउमा राखौं भनेको हो,’ श्रेष्ठले भने ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ र युनेस्को गाइडलाइनले सम्पदा क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन निषेध गरेको छ । बनाएमा युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीबाटै हटाउन सक्छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा कंक्रिटको संरचना नबनाउन हनुमानढोका दरबार हेरचाह कार्यालय र पुरातत्त्व विभागले महानगरलाई पत्राचार गरिसकेका छन् ।
महानगर भौतिक निर्माण विभागका प्रमुख थापाले भने यसअघि विभागलाई पत्र लेखेर जानकारी गराउँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको तर संरचना बनाएपछि मात्र पत्र पठाएको दाबी गरे । ‘मैले ३ महिनाअघिदेखि ३ पटक पत्र लेखिसकें,’ उनले भने, ‘तर विभागले केही प्रतिक्रिया दिएन । अहिले बनाइसकेपछि रोक्न पत्र पठाएको छ ।’ ‘यहाँ संरचना बनाइँदै छ’ भनेर २ साताअघि सूचना टाँस गरे पनि कसैले केही नभनेको तर अहिले विरोध गरिएको उनको भनाइ छ । सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मीले भने महानगरको भनाइलाई गैरजिम्मेवार भनेका छन् ।
‘हनुमानढोकाको महत्त्व नै बुझेन स्थानीय सरकारले,’ श्रेष्ठले भने, ‘महानगरले पुरातत्त्वको पत्रलाई नै बेवास्ता गरेको छ । ऐनले नै निषेध गरेको ठाउँमा सूचना निकालेको थिएँ भनेर हुन्छ ? सूचना निकाल्नु नै गलत थियो भनेर बुझ्नु पर्दैन महानगरले ? ऐन पढ्नु पर्दैन ? संरक्षण भनेको के हो बुझ्नु पर्दैन ? महानगरले झन् सही नजिर राख्नुपर्ने होइन ?’
महानगरले ३ महिनाअघि पनि यहाँ झन्डा राख्ने कोसिस गरेको थियो तर स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि महानगर पछि हटेको थियो । ‘हनुमानढोका क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको झन्डा बनाउनु राम्रो कुरा हो तर कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो ऐतिहासिक ठाउँ भत्काएर बनाउनु भनेको राम्रो होइन । यहाँ गर्नुपर्ने धेरै काम छन् तर महानगर व्यवस्थापन गर्दैन । अनि यस्ता–यस्ता कुरामा चाहिँ अग्रसर हुन्छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०८:०६
जसपा पनि तालमेलकै पक्षमा
केन्द्रबाट तालमेल भएको अवस्थामा बाहेक स्थानीय कमिटीले निर्णय लिने
फाल्गुन ३०, २०७८ मधु शाही
काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको पक्षमा देखिएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित निर्देशिका तय गर्दै यस्तो आधार बनाएको हो । निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार केन्द्रको निर्णय र स्थानीयस्तरमा तालमेल गर्न सकिने उल्लेख छ । जसपाले उम्मेदवार चयनका लागि सक्रियता, लोकप्रियता, दक्षता र निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय भएको अवस्थामा बाहेक स्थानीय कमिटीले अर्को पार्टीको सोही स्तरको कमिटीसँग छलफल गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । उम्मेदवारका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरी माथिल्लो समितिमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यकारिणी सदस्य प्रशान्त सिंहले गठबन्धन सरकारमा भएका दलसँग तालमेलको सम्भावना रहेको बताए । ‘हामी छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्दा पनि जितिएला,’ उनी भन्छन्, ‘तर स्थानीय तहमा गठबन्धन अवस्था हेरेर तालमेल गर्नु जरुरी छ ।’
स्थानीय चुनावमा जसपाको मुद्दा पहिचान र अधिकारसँगै बढी जोड विकासप्रधान मुद्दामा हुने नेताहरूले बताएका छन् । कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहको विकासमा केन्द्रित चुनावी एजेन्डा तय हुने बताए ।
बैठकले संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले शनिबार पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । ‘प्रतिवेदनमा केही असन्तुष्टि देखिए पनि छलफलपछि बैठकले पारित गरेको छ,’ भट्टराईनिकट एक कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘सुरुमा प्रतिवेदन धेरै लामो भयो भन्दै खासगरी मधेस केन्द्रित नेताले सुन्न चाहेका थिएनन् ।’ ती नेताका अनुसार जसपामा ३३ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन वा दस्ताबेज बनाएर छलफल गर्ने अभ्यास थिएन । पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारणी सदस्य रामसहाय यादवले प्रतिवेदन पारित भएपछि जसपा फुट र गुटको भ्रमबाट मुक्त रहेको बताए । ‘पार्टी अब स्थानीय चुनावमा कसरी अगाडि बढ्नेमै केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।
कांग्रेसप्रति नरम रहेको भट्टराईको प्रतिवेदन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीप्रति भने कठोर छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टी सबै एउटै पेन्सिलका फरक–फरक टुक्रामात्रै हुन्,’ उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदनमा एमाले र कांग्रेसलाई एउटै सिक्काको दुई पाटा भनिएको छ । ‘कांग्रेस र कम्युनिस्टको ब्रान्ड नामबाहेक कांग्रेस र एमालेको नीतिमा भिन्नता पाउन गाह्रो छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले माओवादीलाई अवसरवादी र एकीकृत समाजवादीलाई विचारमा अस्पष्ट भनेका छन् । उनले एमसीसीका विषयमा पनि एमाले, माओवादी र समाजवादीले अस्थिरता, अवसरवादी र द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले राप्रपालाई नेपालको रुढिवादी धारको प्रतिनिधि गर्ने दल भनेका छन् भने आफ्नै पार्टीबाट फुटेको लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई विचार, सिद्धान्त र एजेन्डाविहीन भनेर आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै, विवेकशील साझा, जनमतलगात पार्टीको भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०८:०१